Ny birao Linuxero tsara indrindra: Mey 2013 - Vokatra | Avy amin'ny Linux
Desktop Linuxero tsara indrindra: Mey 2013 - Vokatra
Ny fotoana dia handray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny volana. Tena sarotra be ny nanapa-kevitra satria nandefa pikantsary tsara dia tsara ho an'ny latabatra izy ireo.
Na izany aza, rehefa ela dia afaka nisafidy izay ho ahy aho latabatra 10 ambony. Misy karazana distros, tontolo iainana, sary masina tena mahaliana, sns. Mianatra, maka tahaka ary mankafy! Ho ao anaty lisitra ve ny anao?
Fedora 17 kanelina
conky novaina fototra
Sary famantarana style Window
rindrambaiko fitaratra 7
Avelao hanomboka ny flamewar ...
Rafitra: CrunchBang Statler 10
Sary masina: Faience avy amin'i Tiheum
Lohahevitra GTK: Jiro FlatStudio
WM: Mijanona irery ny Compizizany
Lohahevitra Emeraoda: Nasandratr'i Aaron-A-Arts
Fandaharana: tint2, Firefox, Thunar, Terminator, Conky,
Rafitra miasa: Ubuntu 13.04
Tontolo iainana Desktop: Gnome 3.6
Lohahevitra Shell: Zukiwi
Conky: Mizana volondavenona, miaraka amin'ny RAM, WLAN ary CPU
Kintana kanelina (Minty Transparent) sy Nitrux.
Fitsinjarana: openSUSE 12.3
Tontolo iainana: KDE
Sary masina: Kfaenza
Lohahevitra: delorean-dark 3.6
Sary masina: voyager-dark-bleu
Sary masina: Potenza
KWin: Mangarahara oksizenina
Fedora 17 miaraka amin'ny Kanelina
# Fedora19 RC2Beta + 2 Conky ary ny lohahevitra Gnome Icon
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Desktop Linuxero tsara indrindra: Mey 2013 - Vokatra
u___u aza mijanona, pffss ...
SnocK dia hoy izy:
Tsy fantatro akory…. amin'ny manaraka indray dia
Mamaly an'i SnocK
kishimoto dia hoy izy:
Manaova GNU / Linux toa windows ¬_¬
Mamaly an'i kishimoto
Tiguer Vieight dia hoy izy:
Ny birao misy menio fanombohana sary an-tsary sy windows 7 no tsara indrindra, saingy ovako ho toy ny linux ny fanombohana ary ilay laminasa ho linux iray.
Mamaly an'i Tiguer Vieight
Eduardox123 dia hoy izy:
Valiny tamin'i Eduardox123
Ivan Escobares dia hoy izy:
Ataoko fa ny mahatsikaiky indrindra dia ny laharana 4 .. 10 dia mahatsikaiky ..
Ny roa tsy lazaina intsony ..
Valiny tamin'i Iván Escobares
Iza no misafidy ny hisambotra? Misy karazany vaventy izay tena tsara lavitra ka mametraka ny fisamborana toy ny No. 6? na inona na inona! XD
Valiny tamin'i Anon
Emanuel J. Charry dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao nahantona ny ahy. Saingy misy fanitsiana lehibe, mametraka fampahalalana avy amin'ny birao hafa izy ireo. Ity no tena mandeha:
Sary masina: Faenza -> http://bit.ly/a8QJ7h
Conky: Scale Gray, misy RAM, WLAN ary CPU -> http://bit.ly/18sVn4Q
Raha sanatria, jereo, ny tiako horesahina dia ny laharana 4.
Valiny tamin'i Emanuel J. Charry
Jonas Trinidad dia hoy izy:
Tiako ireo sary nalaina! Salama tsara daholo izy ireo, saika ny rehetra, inona no heverin'izy ireo tamin'ny isa 6? Io birao io ihany no misy an'i Kairo Dock, tsy fanao mahazatra akory.
Na ny birao Unity aza dia nanana fijery tsara kokoa ...
Valiny tamin'i Jonas Trinidad
Mila miezaka hatrany ianao ...
Felipe Gonzalez dia hoy izy:
Ho an'ny tanjona iray ny zava-drehetra, manaova fotoana mahafinaritra, tsara fa efa nivoaka indroa 🙂 // Mahafinaritra be ireo birao hafa 😀
Valiny tamin'i Felipe Gonzalez
Nyx dia hoy izy:
Ahoana no nahatongavan'ilay 9 niaraka tamin'i kde ho conky? Mbola tsy vitako ny nametraka azy tsara tany kde D;
Mamaly an'i Nyx
… Toy ny mitifitra bala ny tongotrao amin'ny tongotrao, fa ianao no diso.
BlackBit dia hoy izy:
Tsara laharana 2 ...
Valiny amin'ny BlackBit
Xabier corleone dia hoy izy:
Ahoana no fomba ahazoanao ny conky toy ny tamin'ny fisamborana voalohany?
Manana ny kinova farany misy ny manjaro misy akorandriaka
Tsy haiko ny manamboatra ny script conky config ...
Valiny tamin'i Xabier Corleone
Izaho manokana dia ilay tiako indrindra dia 5, ho ahy no tena mahavariana, na dia tsara be ihany koa aza ny ambiny, ho an'ny fanontana manaraka noraisiny !!!!!!!
Mahatsapa aho fa tsy niasa saina izy ireo nahita ny fakana sary rehetra, hitako marobe sy tsaratsara kokoa tao amin'ny G + navoaka teo afovoany ny ahy 😛 ary tsy fahasahiana ny mijanona ao, fa ny ahy tsara noho ny 6 https://securecdn.disqus.com/uploads/mediaembed/images/510/188/original.jpg
Heveriko ho ahy fa io no tsara indrindra saingy tsy hanafina ny zavatra Linux aho amin'ny zavatra Windows dia toy ny chevrolet incha mividy ford ary manolo ny logo ford amin'ny chevrolet iray. Manantena aho fa tsy dia mazoto loatra ianao ary ekeo ny hevitro
Teniazo. dia hoy izy:
Tiako ny 5 sy 9. Na izany na tsy izany dia aleoko ny ahy tsy nipoitra.
Valiny tamin'i Teniazo.
Ny 9 miaraka amina rindrina hafa.
potika izany !!!
Hahahaha io birao io dia zava-dratsy nitranga tamiko, ato amin'ny kahie aho no ampiasako azy xD ankoatry ny fanafihana nataon'ny mpampiasa lalalal sasany.
Izahay dia mijery azy rehetra, matotra. Tsy mila raisinao manokana izany. Tena tsara ny anao. Amin'ny ankapobeny dia manandrana mitazona fahasamihafana iray amin'ny lafiny distro, tontolo iainana sns. Indraindray isika dia manao azy tsara kokoa ary indraindray tsy manao. Tamin'ity indray mitoraka ity, ohatra, ny ankamaroan'ny fandraisana anjara dia indrisy fa tsy dia be famaritana. Tsy toy izany ny volana lasa. Tsy hampidina ny sandrinao ary handray anjara hatrany.
Mandefasako tanana ianao! Paul.
Tamin'ny 5 Jona 2013 16:26 hariva dia nanoratra i Disqus:
Milamina ny namako! Tsy anjaranao ny mandray azy manokana, zavatra iray ny tsy itovizan'ny hevitra iray ary ny iray hafa dia ny mitsara. Efa nokapohinao ilay faharoa ... Raha amiko dia tsy izy sy "Fa mampiasa Unity": p Fa ho tonga any aminy aho amin'ny manaraka, ampiasao fotsiny ny fahaizanao.
Tena tsara ary nianjera daholo isika; D
Tena tsotra loatra isika HAHAHAHA
Tena tsara izy ireo amin'ny masoandro rehetra amin'ilay win2-7
Tena miombon-kevitra aminao aho, tsy haiko ny fomba handreseny raha maka tahaka ny fandresena izy ... raha toa ka fifaninanana hahazoana solosaina finday linux tsara kokoa
Revo dia hoy izy:
Tsy azoko hoe maninona no tsy VAKANY!
"Na izany aza, rehefa ela dia afaka nifidy izay ho ahy aho ny birao 10 tsara indrindra"
Ireo izay HO ANAO… .. Hevitra manokana, raha tianao tsara nefa koa
PS: Tsy nijanona ihany koa aho ary tsy mimenomenona….
Mamaly an'i Revo
Tsy fantatro raha diso ny anaran'izy ireo na diso ny sary, saingy tsy mety ny sary birao momba ny toerana 6. Miraikitra ny sariko, arahaba
Carlos Francisco Zepeda Salaza dia hoy izy:
biennn mitaona ahy hanohy hahalala
Valiny tamin'i Carlos Francisco Zepeda Salaza
Hoy i Revo, farany izay olona mahatakatra.
Ary koa ry zalahy a, andao hanao ny marina. Izay toa baribariana amiko dia mety ho toa hadalana aminao. Ary ny mifamadika amin'izany. Izay toa tsara aminao toa tsy misy dikany amiko.
Etsy ankilany, manandrana mandray zavatra hafa aho fa tsy hoe lohahevitra fotsiny:
1) misy ny tontolo iainana isan-karazany, distros sns. azo atao izany
2) Raisiko ny safidin'ny mpampiasa hafa amin'ny tambajotra sosialy
3) ireo izay mamaritra ny fikirakiran'izy ireo amin'ny antsipiriany dia miakatra be amin'ny laharako (indrisy tamin'ity indray mitoraka ity dia vitsy dia vitsy no nanao izany na dia nangatahana mazava aza).
Manao izay vitanao ny olona. Aza mimenomenona ... hijanona izy ireo.
Heveriko fa fahadisoana lehibe ny mieritreritra toy izao.
Disguising Linux toy ny Windows dia tena marina. Aza adino fa mety ho fomba tena ilaina izy io hisarihana olona izay tsy dia tia solosaina loatra.
Eny dia hoy izy:
Isam-bolana dia mampakatra pikantsary aho, mahazo mihoatra ny 20 ny tiany ary na dia tsy heverinao aza izany, ny masonkarena 0, indrindra rehefa misafidy ilay naka tahaka ny windows 7 ianao
Birao nomerao 4 no nataoko. Misaotra anao nandefa azy. Fanitsiana, ny info navoakan'izy ireo dia avy amin'ny mpampiasa hafa, ny ahy dia ity:
Misaotra tamin'ny fampitandremana! Nahitsy! 🙂
Sary masina: Faenza
Conky: Scale Gray, misy RAM, WLAN ary CPU
Raha liana amin'ireo rohy misy ny sary masina ianao, ny sary an-tsary, ny lohahevitra na ny conky, dia azonao atao ny mitady azy amin'ny G +, satria navoakako tao izy io.
Tsy ekeko izany. Araka ny nolazaiko tamin'ny hevitra iray hafa dia toa mitombina tokoa ny manafina ny Linux ho Windows. Voalohany, satria mety tsy dia tiako loatra ianao na ianao fa mety maro ny olona mankafy ny "fijery" ananan'i Windows toy ny hafa mety maniry ny "fijery" an'ny MacOS. Ary koa, mety ho fomba iray mahasarika hisarihana ireo mpampiasa Windows ho ao amin'ny Linux, indrindra ireo izay tsy mahalala firy momba ny informatika.
misy tutorial na manual tsotra momba ny "conky" ao amin'ny arch?
Paqco Suarex dia hoy izy:
Salama, inona ny endritsoratra? Salama.
Mamaly an'i Paqco Suarex
Nisy lesoka tamin'ny 6 (araka ny hita avy amin'ny hevitry ny mpampiasa hafa). Nahitsy i alredy.
burakukurou dia hoy izy:
Tsara daholo !! Tiako ny sary shingeki no kyojin amin'ny birao # 9! Tsy maintsy handray anjara aho indray andro any! haha Salama!
Mamaly an'i burakukurou
Francisco javier Guzman dia hoy izy:
mmm ny marina manontany tena aho hoe maninona tsy ahy
Valiny tamin'i Francisco javier Guzmán
Ny vahaolana ho ahy amin'ny fanombohana tsy feno ao amin'ny KDE SC
Ny Paradox (lesoka) an'ny Safidy.